Diyaarado duqeymo ka geystay Buuraha Galgala ee Gobolka Bari – STAR FM SOMALIA
Duqeymahan ayaa dhacay saddexdii habeen ee la soo dhaafay, waxaana dadka degan buuraha ay xaqiijiyeen in duqeymaha ay socdeen saddex habeen oo xiriir ah.
Mid ka mid ah dadka deegaanka oo sababo ammaan u diiday magaciisa ayaa u sheegay Idaacada VOA in diyaaradaha duqeymaha geystay ay dhinaca badda ka yimaadeen.
“Waxaa ka dhacay duqeyn cirka meelo ka mid ah buuraha calmadow ee Galgala, meelaha duqeymaha ay ka dhaceen waxay ahaayeen goobo dad xoolo dhaqato degenaayeen, duqeymahan waxay socdeen habeenkii arbacadii, khamiistii iyo jimcihii”ayuu yiri qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay VOA.
Buuraha Galgala ayaa waxaa horay dagaalo ugu dhex maday dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab iyo Ciidamada Puntland.
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa soo baxayay in buuraha Galgala ay xeryo tababar ka furteen dagaalyahano taabacsan Daacish, kuwaasoo ka goostay Al-Shabaab.